HIM | Health in Myanmar » 2012 » July
AIDS ရောဂါသည်တွေကို ကရုဏာထား ဆက်ဆံဖို့ တိုက်တွန်း
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, ပညာပေး, အခွင့်အရေး
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဗွီဒီယို သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ သလို သမ္မတဟောင်းကတော် လော်ရာဘုရှ် ကလည်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာမှာ HIV AIDS ဝေဒနာသည်တွေအပေါ် နားလည်မှုနဲ့ ကရုဏာထား ဆက်ဆံကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစား အောင်မြင်မှုများကြောင့် အေ့ဒ်စ်ရောဂါ ကုသရန် မျှော်လင့်ချက် ရှိလာကြောင်း ပညာရှင်များ သုံးသပ်
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပိုးကင်းစင်သွားခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့သော လူအချို့နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစားအောင်မြင်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုများကြောင့် ဆယ်စုနှစ်သုံးစု ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သည့် အေ့ဒ်စ်ရောဂါကို အမြစ်ဖြတ်နိုင် ရန် မျှော်လင့်ချက် ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း
အမေးအဖြေ (၅၆) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မေးတဲ့သူပြောတဲ့နေရာမှာလဲ မသိလှပါ။ မြန်မာပြည်မှာ HIV အတွက် ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာတွေဆိုပြီး တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ လူနာရဲ့ လုံခြုံမှုကို နည်းလည်ကြသူ များပါတယ်။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar8 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Heavy metal objects အလေးစား သတ္တုတွေကိုလဲ လိင်တံထဲထည့်ကြတယ်။ Penile incarceration လိင်အင်္ဂါ အနာ ဖြစ်ရင် ကုသရတာ ပိုခက်ခဲတယ်။ ပုံမှန်ခွဲစိတ်ခမ်းသုံး ကရိယာတွေနဲ့ မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင် HIV ရောဂါပိုး ပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်ရေး အတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီပြီး ကူညီ ထောက်ပံ့ ခဲ့ပါတယ်။
Here is an abstract and poster shown on Thursday in DC. Are there any other programmes for the children of sex workers in Myanmar? hodgson poster [him] moderator ++++++++++++++++++ THPE352 – Poster Exhibition Vulnerabilities facing the children of female sex workers in Myanmar and Bangladesh:aqualitative study I. Hodgson1, R. Lovich2 1Trinity College Dublin, […]
လိင်တူချစ်သူတွေကို အဓိက ကူညီပေးပါတယ်
Author: HimBur | Category: Myanmar, News, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, ကွန်ဒုံး, ဂေး
လိင်တူချင်း ချစ်သူတွေကြားမှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ကာကွယ်ရေး လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ကိုလုံးလုံးတို့ လုပ်နေတဲ့နယ်မှာ အဲလိုမျိုးလူတွေ ဘယ်လောက် ရှိလဲဗျ။
The International AIDS Society betrayed sex workers
There is almost no sex worker presence at the International AIDS Conference AIDS 2012 that ends tomorrow in Washington, DC. The International AIDS Society that runs the conferences betrayed sex workers. The International AIDS Society is celebrating the return of the conference to the US after twenty two years. It is patting itself on the […]
Stigma reduction is rarely measured
Attendingasession withatitle slide “No getting to zero without scale-up of stigma reduction” on the first day of AIDS 2012 gave the [him] moderatorachance to think about what works in stigma reduction. Most stigma reduction interventions are not evaluated for effectiveness. Wouldn’t acting to decrease discrimination and clearly measuring it […]
Here are two Chinese abstracts from the International AIDS Conference in Washington DC. Both of them mention Myanmar though there doesn’t appear to beaclear reason to do so. Is proximity to Myanmar necessary or sufficient for an epidemic to need methadone or CD4 cell counts? Chinese scientists and implementers should leave Myanmar out […]
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အကူအညီ
၂၀၁၂ ခုနှစ် လိင်ကတဆင့် HIV ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး – ဖဲကြိုးနီဆု ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ The HELP အဖွဲ့ကို လက်ရှိ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ကျင်းပနေသော နိုင်ငံ တကာ အေ့စ် ညီလာခံတွင် ချီးမြင့်ကြောင်း ကြားသိရ
AIDS ရောဂါအပေါ် အမြင်မှန်ဖို့ ဒေါ်စု တိုက်တွန်း
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, နည်းလမ်း, အခွင့်အရေး
AIDS ရောဂါကို ပြဿနာတရပ်လိုမျိုး လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတခုလုံးက မှန်မှန်ကန်ကန် တုန့်ပြန် ကိုင်တွယ်သွားဖို့လိုမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေး တိုက်တွန်း သွားပါတယ်။